Bit By Bit - Sava lalana - 1.4 Themes amin'ity boky ity
Lohahevitra roa ao amin'ny boky dia 1) mampifangaro voninkazo sy custommades ary 2) etika.
Lohahevitra roa no mihazakazaka manerana an'ity boky ity, ary tiako ny hampisongadina azy ireo amin'izao fotoana izao mba hahitanao azy ireo rehefa miverina izy ireo. Ny voalohany dia azo aseho amin'ny alalàn'ny fampitahana iray izay mampitaha roa lehibe: Marcel Duchamp sy Michelangelo. Duchamp dia fanta-daza amin'ny alahelony, toy ny Loharano , izay nandraisany zavatra tsotra ary nanamboarany azy ho zavakanto. Ny Michelangelo, etsy ankilan'izany, dia tsy niova. Raha te hamorona sarivongan'i Davida izy, dia tsy nitady marika toy ny an'i Davida izy: nandany telo taona niasana hamorona ny seho nataony izy. Davida dia tsy voaomana; Mpiasam-panjakana izany (sary 1.2).
Sary 1.2: Loharano nataon'i Marcel Duchamp sy David an'i Michaelangelo. Ny loharano dia ohatry ny vonomoka, izay ahitan'ny mpanao asa an-tsary iray izay efa misy eto amin'izao tontolo izao dia mamerina izany amin'ny zavakanto. David dia ohatry ny zavakanto izay noforonina tsianjery; Mpiasam-paty izy io. Ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia ahitana ny mofomamy sy ny fiompiana. Sarin'ny Loharano nataon'i Alfred Stiglitz, 1917 (Loharano: Ilay Lehilahy Jamba , No. 2 / Wikimedia Commons ). Sarin'i David an'i Jörg Bittner Unna, 2008 (Loharano: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).
Ireo karazana roa ireo-readymades sy custommades-sarintany ho toy ny endrika izay azo ampiasaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika. Araka ny hitanao, ny sasany amin'ireo ohatra ato anatin'ity boky ity dia ahitana ny famerenana amin'ny laoniny ny loharanom-baovao lehibe natsangan'ny orinasa sy ny governemanta teo aloha. Tamin'ny ohatra hafa dia nanomboka tamin'ny fanontaniana iray manokana ny mpikaroka ary nampiasa ny fitaovana ampiasaina amin'ny vanim-potoana nomerika mba hamoronana ny angona ilaina hamaliana izany fanontaniana izany. Rehefa vita tsara, dia mety ho mahery vaika ireo fomba roa ireo. Noho izany, ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia ahitana ny mofomamy sy ny fiompiana; Anisan'izany i Duchamps sy Michelangelos.
Raha ampiasainao amin'ny ankapobeny ny angon-drakitra voatahiry, manantena aho fa ity boky ity dia hampiseho aminao ny sandan'ny data custommade. Ary toy izany koa, raha mampiasa ny data custommade amin'ny ankapobeny ianao, manantena aho fa ity boky ity dia hampiseho aminao ny sandan'ny data voaomana. Farany, ary ny tena zava-dehibe, manantena aho fa ity boky ity dia hampiseho aminao ny lanjan'ny fampifangaroana ireo karazana roa ireo. Ohatra, i Joshua Blumenstock sy ny mpiara-miasa dia anisan'ny Duchamp ary i Michelangelo; Naverin'izy ireo ny lisitry ny antso (paremade) ary namorona ny angona fanadihadiany manokana izy ireo (custommade). Ity fanovozam-bary vita amin'ny vita amin'ny kitapom-batana sy fiompy ity dia lamina izay ho hitanao manerana an'ity boky ity; Mitaky hevitra avy amin'ny siansa sosialy sy ny siansa momba ny angom-baovao izy io, ary matetika dia mitarika amin'ny fikarohana lalina indrindra.
Ny lohahevitra faharoa mandeha amin'ny alalan'ity boky ity dia etika. Asehoko anao ny fomba mety hampiasan'ny mpikaroka ny fahaiza-manaon'ny vanim-potoana nomerika mba hanaovana fikarohana mahaliana sy manan-danja. Ary hasehoko anao ny fomba fijerin'ny mpikaroka manararaotra ireo fahafaha-manao ireo ireo fanapahan-kevitra ara-moraly. Ny toko faha-6 dia tena mifantoka amin'ny etika, fa mampiditra ny fitsipi-pitondrantena ao anatin'ireo toko hafa ihany koa satria, amin'ny vanim-potoana nomerika, ny etika dia ho lasa ampahany manan-danja amin'ny sehatry ny fikarohana.
Ny asan'ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia mijery indray. Ny fahafahana miditra amin'ny rakitra an-kafaliana avy amin'ny olona 1,5 tapitrisa dia mahavita manararaotra ny fikarohana, saingy mamorona voka-dratsy ihany koa izany. Ohatra, Jonathan Mayer sy ireo mpiara-miasa (2016) dia naneho fa na dia "rakitsoratra tsy fantatra anarana" (izany hoe, ny angon-drakitra tsy misy anarana sy adiresy) dia azo ampifandraisina amin'ny fampahalalana ampahibemaso mba hamantarana ireo olona manokana ao amin'ny angon-drakitra ary hanisy vaovao misongadina izy ireo, toy ny fampahalalam-baovao sasantsasany. Raha mazava tsara dia tsy nanandrana ny hamoaka fampahalalana mafonja momba ny olona ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa aminy, saingy ny fahafaha miditra amin'izany dia midika fa sarotra ho azy ireo ny mahazo ny antso an-tariby ary dia nanery azy ireo handray fiarovana marobe nandritra ny fikarohany ny fikarohana.
Ankoatra ny antsipirian'ny rakitsoratra antsoina, dia misy ny fihenjanana fototra izay mandalo amin'ny fikarohana ara-tsosialy marobe amin'ny vanim-potoana nomerika. Ireo mpikaroka - matetika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta - dia mampitombo ny heriny eo amin'ny fiainan'ireo mpandray anjara. Amin'ny fahefana dia midika izany fahafahana manao zavatra amin'ny olona tsy misy fankatoavana na fanentanana akory. Ohatra, ireo mpikaroka dia afaka mandinika ny fitondran-tenan'ny olona an-tapitrisany ankehitriny, ary araka izay hamariparitako azy dia afaka mandefa olona an-tapitrisany amin'ny fanandramana goavana ihany koa ny mpikaroka. Ankoatr'izany, izany rehetra izany dia mety hitranga raha tsy misy ny fanekena na ny fanentanana ny olona voakasik'izany. Raha mitombo ny herin'ny mpikaroka, dia tsy nisy fitomboana mitovy amin'ny fomba tokony hampiasana azy io. Raha ny marina, ny mpikaroka dia tsy maintsy manapa-kevitra ny fomba hampiharana ny fahefany amin'ny alàlan'ny fitsipika sy lalàna ary fitsipika mifanohitra sy mifanohitra. Io fitambarana fahaiza-manao matanjaka io sy ny torolàlana manjavozavo dia mety hanosika ireo mpikaroka mahomby mba hahatonga azy ireo handray fanapahan-kevitra sarotra.
Raha mifantoka amin'ny famolavolana fikarohana ara-tsosialy dizitaly ianao amin'ny ankapobeny dia manantena aho fa ity boky ity dia hampiseho anao fa ireo fahafahana ireo ihany koa dia mamorona loza vaovao. Ary koa, raha mifantoka amin'ireto risika ireto ianao dia manantena aho fa ity boky ity dia hanampy anao hahita ireo fahafahana-fahafahana mety hila loza mety hitranga. Farany, ary ny tena manan-danja dia manantena aho fa ity boky ity dia hanampy ny tsirairay handanjalanja ny loza mety hitranga sy ny fahafaha-manao noforonin'ny fikarohana ara-tsosialy dizitaly. Miaraka amin'ny fitomboan'ny hery, tsy maintsy mitombo koa ny andraikitra.